Lisea Thomas Bevan Toamasina Mankalaza ny faha 90 taonany
Natomboka omaly alatsinainy tamin’ny fametrahana ny vato fehizoro ny fankalazana ny faha 90 taonan’ny lisea tsy miankina amin’ny fanjakana, FJKM Thomas Bevan ao Toamasina.
Hanamboarana tranovato iray lehibe misy rihana 2 ary efitrano fianarana miisa 4 ny ambany. Ny ao ambony kosa dia efitrano iray malalaka mitovy amin’ilay efitrano fianarana 4. 100% hatrany, raha ny fanamarihana, ny vokam-panadinana CEPE tao amin’ity lisea ity tao anatin’ny 5 taona. Tsy mifanalavitra amin’izany ny BEPC sy ny Bakalorea. Ny taona 1930 no niorina voalohany tao amin’ny FJKM Betela Tanambao V ny lisea, izay sady trano fianarana no trano fivavahana. Mbola trano ravim-potsy izany ny taona 1944 nialohan’ny nifindrany tsy lavitry ny Betela. Ny taona 1956 no nanamboarana ny tranovato lehibe mbola mijoro hatram’izao. Ny taona 2008 ka hatramin’izao kosa no nitantana ny lisea ny provizora Lantoniaina Gidéon Ranaivoson. Raha nambaran’ity Provizora hatrany dia ny volana novambra izao no hotokanana ity trano izay tsangambaton’ny faha 90 taonan’ny lisea FJKM Thomas Bevan ity.